Akwụkwọ Matt Nettleton na Martech Zone |
Edemede site na Matt Nettleton kwuru
Ọbụna uru ịlaghachi na ogige ọzụzụ
Thursday, June 24, 2010 Tọzdee, Ọktoba 4, 2012 Matt Nettleton kwuru
Kedu ihe kpatara Colts ji aga Ogige Ọzụzụ? Ọ bụ na ha amabeghị etu esi egwu bọọlụ? Na July 30th nke afọ a ndị Colts ga-aga Ogige Ọzụzụ, nke a ga-egosi mmalite nke izu anọ nke omume siri ike ezubere ịmanye ndị egwuregwu ka ha lekwasị anya n'ihe ha kwesịrị ime iji mee ka ikike ha nwere ịgba bọl. Mana ọ dị ka igbu oge nye m, ka emechara
Kedu ihe ma ọ bụrụ na ahịa gị na-arụ ọrụ?
Mọnde, Febụwarị 1, 2010 Fraịde, Ọgọstụ 2, 2013 Matt Nettleton kwuru
Dịka onye na-azụ ahịa ahịa, ana m arụ ọrụ na ụlọ ọrụ n'ọtụtụ ụlọ ọrụ. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụlọ ọrụ ọ bụla m na-arụkọ ọrụ na-etinye ego karịa afọ a karịa nke ikpeazụ na ịre ahịa ịntanetị, gụnyere mgbasa ozi mmekọrịta. O di nwute na otutu n'ime ulo oru ndi a, ahia intaneti ha na aru oru ma ha na enweta oku na ozi email site n’aka ndi ahia ndi choro ma soro ha na intaneti. Mana ha na-ahụta nsogbu na-akpata nsogbu, ahịa
Ọbụna Azụ Nwụrụ Anwụ Na-ese n'elu
Sunday, November 22, 2009 Tọzdee, Ọktoba 4, 2012 Matt Nettleton kwuru
Na-etolite, otu onye nwere nchekwube na enweghị nchekwube zụlitere m, mama m bụ onye nwere obi ụtọ kachasị nwee ọ friendụ na-enweghị obi ụtọ ị nwere ike izute. Ọ gbara mbọ hụ na a zụlitere m nnukwu echiche, na-achọghị ihe ọ bụla ma ọlị maka mmadụ niile ma na-eme ike m niile iji nyere ndị mmadụ aka. Mgbe m bidoro ịmụ ihe na itozu okè, ajụrụ m ya ihe kpatara o ji enyere ụfọdụ ndị ọ na-enweghị mmasị na ya n'anya na nzaghachi ya bụ
N'ehihie a, m gbara ajụjụ ọnụ Matt Nettleton. Matt bu onye ahia ahia ahia na onye nkuzi ahia m n’ebe a na Indianapolis. Ọrụ ọ rụzuru ugbu a agbanweela mmụọ m (na-adịghị mma) na ire ma kwanye ikike ịzụ ahịa m. Ahịa bụ ọtụtụ ihe siri ike karịa ka ọ na-adịbu… site na oge folks na-akpọ gị ahịa otu, ha na-ọma mara. Ekwenyere m na ọ kpatara nnukwu mgbanwe na sistemụ ebe